Ireo hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen tamin'ny taona 2021 | Vaovao momba ny dia
Lola curiel | | Danemark, General
Copenhague dia iray amin'ireo tanàna malaza any Danemark. Ny rivotra iainana ao an-dalambe sy ny isan'ny drafitra natolotra ataovy safidy manintona tokoa ny renivohitra danoà handany andro vitsivitsy amin'ny fialan-tsasatra. Na izany aza, toy ny matetika mitranga any amin'ny tanàna hafa misy manintona mpizahatany, mitadiava hotely mora vidy izay tsy dia lavitra ny foibe mety ho nofy ratsy. Noho izany, manolotra anao ny lisitry ny hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen izahay, ao anatin'izany ny trano mora vidy ary akaikin'ny afovoan-tanàna.
6 Hotel Ottilia avy amin'i Brøchner Hotels
Ny safidy tsara indrindra raha mitady kalitao sy hotely akaikin'ny afovoan'i Copenhagen ianao. Any Ao afovoan-tanàna, ny trano fandraisam-bahiny CitizenM Copenhagen Radhuspladsen dia trano mahaliana indrindra raha mitady fampiononana amin'ny vidiny mirary ianao. Tsarovy fa Copenhagen dia tsy tanàna mora vidy. Na izany aza, ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny, ho an'ny hotely kintana 4, dia mitombina ary tafiditra ao ny sakafo maraina. Amin'ny lafiny iray, ny toerana misy azy dia mety raha te hizaha fitsangatsanganana ianao nefa tsy mandany fotoana be loatra amin'ny fitaterana. 600 metatra miala ny Tivoli Gardens no misy ny hotely, iray amin'ireo voly fialamboly tranainy indrindra any Eropa izay tsy isalasalana fa ho iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ny fitsidihanao ny tanàna.
Tsy misy isalasalana, ny tsara indrindra amin'ny CitizenM Copenhagen Radhuspladsen dia haingo maoderina sy maro loko izay mampanakaiky ireo mpitsidika azy ny zavakanto danoà. Ny fitsangatsanganana dia fomba iray tena tsara hampiatoana amin'ny fanazaran-tena, rehefa mandeha isika dia mitady hianatra zavatra vaovao koa ary mifandray amin'ireo kolontsaina hafa. Ny rindrin'ity hotely ity Rakotra sary hosodoko sy hosodoko hosodoko avy amin'ny mpanakanto danoà izy ireo. Noho izany, ny fijanonan'ny vahiny dia nanjary traikefa nahafahan'izy ireo nahafantatra bebe kokoa ny kolotsaina any Danemark.
Ny safidy mety indrindra raha mitady hotely mora vidy any Copenhagen sy ny fiainana amin'ny alina ianao. The Generator Copenhagen dia toeram-ponenana tonga lafatra tanora izay te-hijanona amin'ny toerana natao ho an'ny faharesen-dahatra sy ny fahafinaretana. Ny fialofana manana bara alina mahafinaritra izy Amin'izay fotoana izay dia misy ny fandaminana ny seho karaoke sy ny DJ, toerana mety tsara hanaovana cocktails izany, hihaona amin'ireo mpandeha hafa ary hankafizanao mozika tsara. Toerana tsy hatoriana fotsiny io, fa afaka mamorona fiainana be dia be ao anatin'ny trano fandraisam-bahiny.
Na izany aza, raha aleonao ny mivoaka, mandeha ary mahalala ny tanàna, ity trano itoerana ity dia safidy mety ihany koa. 7 minitra monja avy eo amin'ny tobin'ny metro Kongens Nytorv no misy azy ary tena akaiky azy Frederiks Kirke (ny fiangonana marbra) sy ny lapan'ny Amalienborg, ilaina amin'ny fitsidihanao ny tanàna.
Ny efitra mora indrindra no zaraina, zavatra mety hiteraka olana raha tsy zatra matory ao amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ity karazana ity ianao. Na izany aza, ho an'ireo mila fiainana manokana, ny trano fandraisam-bahiny manolotra ihany koa ny fahafaha-mitazona efitrano manokana. Tombony iray hafa an'ny Generator Copenhagen dia izany misokatra ny fandraisana 24 ora, ka tsy hanana olana ianao raha toa ka mila atao ny enregistrement na ny Zahao hoe vao maraina.
Safidy tsara ho an'ireo izay mitady hotely mora vidy any Copenhagen miaraka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara. The CityHub Copenhagen dia hotely maoderina izay misongadina amin'ny fijerin'ny tena manokana manolotra ny mpanjifany izy ireo. Trano fandraisam-bahiny Copenhagen maro no nampiditra ny haitao isan'andro isan'andro hanatsarana ny serivisin'izy ireo, ny sasany mampindrana takelaka ho an'ny vahininy ary mamela azy ireo hifehy ny jiro ao amin'ny efitrano amin'ny alàlan'ireny karazana fitaovana ireny aza.
Na izany aza, tsara kokoa aza ny tolo-kevitry ny CityHub Copenhagen. Tamin'ny alàlan'ny teknolojia dia nahavita nanitatra ny serivisin'izy ireo mihoatra ny rindrin'ny hotely izy ireo. Namorona rindranasa azon'ny vahiny apetraka amin'ny findainy maimaimpoana izy ireo. Avy amin'ity rindranasa ity dia afaka mifampiresaka sy mifandray amin'ireo mpiasa ao amin'ny hotely ny mpanjifa. Fitaovana tena tsara angatahana torohevitra sy tolo-kevitra eo am-pizahana ireo arabe rehetra eto an-tanàna. Ho fanampin'izany, ny efitrano dia manana stereo izay azonao ampifandraisina amin'ny alàlan'ny Bluetooth, zavatra ankasitrahana satria, mazàna, tsy mitondra mpandahateny ao anaty valizintsika isika ary io no mahazatra tsy mahazatra antsika matetika rehefa mandeha isika.
Ny trano fandraisam-bahiny mifamatotra tsara amin'ny afovoany, 550 metatra fotsiny ny gara metro Frederiksberg Allé, noho izany dia tsy hanana olana ianao raha mankany amin'ireo toerana mahaliana ny mpizahatany. Na izany aza, raha tsy tianao ny mitondra fitateram-bahoaka dia tadidio fa Copenhagen dia tanànan'ny bisikileta, afaka hanofa izy ireo saika na aiza na aiza! Amin'ny alàlan'ny familiana kely, avy ao amin'ny CityHub Copenhagen dia afaka tonga any amin'ireo toerana misy solontena toy ny National Museum of Denmark na ny Frederiksberg Have zaridaina ao anatin'ny folo minitra latsaka.
Ny fampiononana rehetra ao an-trano ao amin'ny hotely Copenhagen. Indraindray rehefa mandeha izahay dia tsy mahatsapa ny handany ny fotoanantsika manontolo hihinana isaky ny trano fisakafoanana mankany amin'ny trano fisakafoanana, indrindra raha tsy te handany vola be isika ary eto amin'ny tanàna iray lafo toa an'i Copenhagen. Raha aleonao manana safidy mahandro ny sakafonao manokana na raha te hanana toerana bebe kokoa noho ny tolotra efitrano fandraisam-bahiny nentim-paharazana ianao, ny Aperon Apartment Hotel dia safidy tena tsara ho anao. Ao amin'ireo efitranony madinidinika miaraka amina fomba danoziana danoà dia afaka mankafy ianao ny fampiononana rehetra ao an-trano, tsy very ny tombony amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Araka izany, manana lakozia izy io maoderina, feno fitaovana ary miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny malalaka ahafahanao miala sasatra aorian'ny fiainanao an-tanàna. Safidy tena mahaliana izany raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao ary ny hevitra hoe hiara-matory ao amin'ny efi-trano iray dia tsy dia manintona anao loatra. Ary koa, tsara ny firafitry ny trano. Ny efi-trano samy hafa dia tena miasa sy milamina, feno varavarankely izay mamela anao hankafy hazavana voajanahary mahafinaritra.
Mikasika ny toerana misy azy, ny Aperon Apartment Hotel dia ao amin'ny distrikan'ny Indre By, ny afovoany indrindra any Copenhagen, noho izany dia hanana ny toerana rehetra mahaliana anao eo am-pelatananao. Ny Castle Rosenborg malaza dia 700 metatra miala fotsiny, ary afaka mandeha tongotra mankany amin'ny Station Nørreport ianao ao anatin'ny 5 minitra.
Ny toeram-ponenana tsara ho an'ireo mandeha any Copenhagen amin'ny orinasa. The Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade dia hita ao amin'ny afovoan-tanàna, ao amin'ny distrikan'i København. Ny toerana misy azy dia tsara. Tena akaikin'ny toerana mahaliana ny mpizahatany izy io ary ao a faritra feno fiainana. Ao amin'ny manodidina ny trano fandraisam-bahiny dia hahita bara, trano fisotroana ary trano fisakafoanana tsy misy farany hohanina ianao, misotro ary mampitony ny rivotra iainan'ny renivohitra danoà.
Na izany aza, ny antony mahatonga ity hotely ity ao amin'ny lisitry ny hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen amin'ny taona 2020 dia tsy ny toerana misy azy ihany. The Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade Is a toerana sahaza ho an'ireo mandeha any amin'ny tanàna amin'ny asa aman-draharaha. Ny faritra iraisany dia voahodidin'ireo varavarankely lehibe sy varavarankely lehibe mamela anao hankafy fahitana mahatalanjona ny tanàna. Ireo faritra ireo dia misy faritra natokana hiasa. Manana a ivon-toerana bussines, miaraka amin'ny solosaina hampiasaina maimaim-poana, ary ny iray manolotra habaka marobe ahafahana miasa amin'ny fomba milay.
Maoderina ireo efitrano misy famolavolana tena milamina ary na dia tsy dia lehibe loatra aza izy ireo dia habe ampy. Manana latabatra kely izy ireo, teboka iray hafa manohana raha tsy miala voly any an-tanàna ianao. Ho fanampin'izay, noho ny akaiky ny seranan-tsambon'i Copenhagen, misy ny efitrano misy zaridaina amoron-dranomasina. Iza no tsy te hankafy izany fomba fahitana izany rehefa mifoha?
Hotel Ottilia avy amin'i Brøchner Hotels
Volavola sy fomba fijery 360 of ao an-tanànan'i Copenhagen, hotely filokana ho an'ny fotoana manokana. Ary farany, ny trano izay mendrika hanidy ity lisitr'ireo hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen ity amin'ny taona 2020 dia ny Hotel Ottilia by Brøchner Hotels. Na dia marina aza fa tsy dia mora vidy sy afovoany tahaka ny sasany izy, dia toerana misy fiangaliana be io, mety amin'ny fotoana manokana.
Soa ihany fa mahafinaritra ny trano fandraisam-bahiny. Izy io dia natsangana tao amin'ilay efa nisy, nandritra ny 160 taona mahery, ny labiera malaza indrindra any Danemark., ny Carlsberg. Ny firafitry ny ozinina taloha dia mifangaro tsara miaraka amin'ireo singa famolavolana maoderina kanto. Notazonina ny pitsopitsony rehetra momba ny ozinina. Na eo amin'ny façade aza, ho fanomezam-boninahitra ireo ampinga volamena 64 izay nivoaka avy teo amin'ny rindrina raha mbola nijanona ny labiera dia nametaka varavarankely boribory mahavariana izy ireo.
Manolotra serivisy maro ao amin'ny tranony ny trano fandraisam-bahiny: serivisy fanofana bisikileta, spa, gym, eny fa na ny fisotroana na trano fisakafoanana aza. Ankoatr'izay, isan'andro, mandrindra ny hotely a ora mahafaly izay ahafahana misotro divay ho an'ny vahiny rehetra, hetsika mety hialana voly ary hiala sasatra aorian'ny fizahan-tany tontolo andro.
Tsy isalasalana fa ny trano fisakafoanana no tsara indrindra amin'ny hotely. Any amin'ny rihana avo indrindra amin'ilay trano no misy azy manana ny iray amin'ireo fomba fijery mahavariana an'i Copenhagen. Araka izany, avy amin'ny latabatr'izy ireo dia azonao atao ny manandrana sakafo italiana matsiro, nefa mankafy ny fomba fijerin'ny renivohitra danoà 360º.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ireo hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen